ओलीको प्रस्ताव झुक्काउने र अलमलाउने नियतका साथ आयो : रामकुमारी झाँक्री - Dainik Online Dainik Online
ओलीको प्रस्ताव झुक्काउने र अलमलाउने नियतका साथ आयो : रामकुमारी झाँक्री
नेकपा (एमाले)की नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झुक्काउने मनसायका साथ ६ बूँदे प्रस्ताव राखेको टिप्पणी गरेकी छिन् ।साँच्चै एकताको लागि गरिएको भए एकता गर्नुपर्ने दुई पक्ष बिचमा सहमति गरी वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपाल सहितको संयुक्त वक्तव्य आउनु पर्ने तर्क उनले गरेकी छिन् ।
यस्तो छ उनको धारणा भर्खरै मिडियामा अध्यक्ष क. खड्ग प्रसाद ओलीको नामबाट आएको वक्तव्य पढ्न पाइयो। सुरमा यो वक्तव्य देखेर म पनि खुसी भएँ। उत्साहित हुँदै पढेँ। पढ्दै जाँदा लाग्यो पार्टीको एकता खास उद्देश्यका लागि थियो र एकता भङ्ग पनि खास उद्देश्य पुरा गर्न योजनागत ढङ्गले गरिएको कुरा दिनको घाम जस्तै छ।
अब रह्यो नेकपा एमालेको एकताको कुरास् यो साँच्चै एकताको लागि गरिएको भए एकता गर्नुपर्ने दुई पक्ष बिचमा सहमति गरी वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपाल सहितको संयुक्त वक्तव्यको रूपमा आउँथ्यो। एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन‘ झुक्क्याउन, अलमलाउन र मिडिया कन्जम्सनको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अझ गम्भीर कुरा त के छ भने बुँदा नं. ४ मा अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरिनेछ भनिएको छ। यो कसले फिर्ता लिनेरु फिर्ता लिने पक्षसङ यो वक्तव्य जारी गर्न सहमति वा संवाद आवश्यक पर्ने होइन र?
लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानलाई क्रियाशील गराउन, संसद् पुन स्थापना गर्न, हामी अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थियौँ। हामीहरूले यसको सुनिश्चितता बिना हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन।
त्यसैले यो एक प्रकारले पार्टी एकता हुन नदिने डिजाइनका साथ आएको वक्तव्य हो। यसप्रति भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दछु। विकसित घटनाक्रम र समग्र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति वारे हाम्रो पार्टीको स्थायीको बैठक बसी संस्थागत धारणा दिइनेछ।